Joseph Yoland : “Hidina an-dalambe ny vahoaka… “ | NewsMada
Joseph Yoland : “Hidina an-dalambe ny vahoaka… “
“Midina an-dalambe rehefa vonona ny vahoaka malagasy tompom-pahefana. Rehefa tsy mety mihaino ny fitondrana, tsy mainitsy hanao an’izay izahay. Tsy maintsy fehezinay tsara izay mba tsy hisian’ny hoe mamaky trano, toratoraka… Efa betsaka ny dingana natao, fa rehefa tsy henoina: ny vahoaka marary no haneho ny heviny.”
Io no nambaran’ny eo anivon’ny Firaisankina ho fanavotana an’i Madagasikara, Yoland Joseph, teny Andavamamba, ny faran’ny herinandro teo, tamin’ny fivoriambe sy fampahafantarana ny fijoroan’izany vovonana vaovao izany. Misy fikambanana 50 mahery any ho any ao aminy, ary mbola miantso ny hafa: sendikà, antoko…
Tanjona ny fanorenana ifotony
Tsy ny olona hapetraka eo amin’ny fitondrana no tanjona, fa ny fanovana ny rafitra na ny fanorenna ifotony. Tsy hametraka fe-potoana amin’izany izy ireo. Rehefa vonona hiaro ny tanindrazany sy ny tombontsoany ny maro anisa amin’ny vahoaka: lasa… “Tsy maintsy ho tonga amin’ny fakan’ny vahoaka fanapahan-kevitra, rehefa tsy manao ny iraka ampanaovina azy ny fitondrana”, hoy izy.
Ny vahoka no fanjakana: tompon’ny fahefana. Ampindramina ny fahefana ihany ny mpitondra. Rehefa tsy manao tamberin’andraikitra amin’ny vahoaka tompom-pahefana ny mpindrana, tsy tokony hitantana ny firenena intsony.
Haka ny fanapahan-kevitra ato ho ato ny vahoaka tompom-pahefana. Tsy maintsy aseho amin’ny alalan’ny fahefam-bahoaka ny fitakiana. Misy miteny hoe andao hidina an-dalambe avy hatrany handamina izany. Tsy tokony hisy olona haratra na maty amin’izany. Tanjona ny fanehoan’ny vahoaka ny fahefana ananany.